Joeri 3 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Jehovha anotonga marudzi ese (1-17)
Bani raJehoshafati (2, 12)
Bani rekutongwa (14)
Jehovha ndiye rusvingo rwevaIsraeri (16)
Jehovha anokomborera vanhu vake (18-21)
3 “Nekuti mumazuva iwayo nepanguva iyoyo,Pandichadzosa nhapwa dzeJudha neJerusarema,+ 2 Ndichaunganidzawo marudzi eseNdodzika nawo kuBani raJehoshafati.* Ndichavatonga ikoko+Nemhaka yezvavakaitira vanhu vangu uye nhaka yangu Israeri,Nekuti vakavaparadzira pakati pemamwe marudzi,Uye vakagovana nyika yangu.+ 3 Vaikanda mijenya vachigovana vanhu vangu;+Vairara nepfambi voibhadhara nekuipa kakomana,Vachitengesa kasikana kuti vapiwe waini yekunwa. 4 Ndakakutadziraiwo chii,Imi Tire neSidhoni, nenzvimbo dzese dzeFiristiya? Pane zvandakakuitirai zvamuri kutsiva here? Kana muri kunditsiva,Ndichaita kuti zvamuri kundiitira zvidzoke kwamuri nekukurumidza zvikuru.+ 5 Nekuti makatora sirivha yangu negoridhe rangu,+Uye makaenda nepfuma yangu yakanakisisa kutemberi dzenyu; 6 Uye makatengesa vanhu vemuJudha neJerusarema kuvaGiriki,+Kuti muvaendese kure nenyika yavo; 7 Zvino ndiri kuita kuti vadzoke vachibva kwamakavatengesa,+Uye ndichakuitirai sezvamakavaitira.* 8 Ndichatengesa vanakomana nevanasikana venyu kuvanhu venyika yeJudha,+Uye vachavatengesa kuvarume vekuShebha, rudzi ruri kure kure;Nekuti Jehovha pachake azvitaura. 9 Zivisai izvi pakati pemarudzi:+ ‘Gadzirirai kurwa! Kurudzirai varume vane simba! Mauto ese ngaaswedere pedyo, ngaauye kuzorwa!+ 10 Pfurai miromo yemagejo enyu kuti ive mapakatwa uye mapanga enyu ekuchekerera miti kuti ave mapfumo. Asina simba ngaati: “Ndine simba.” 11 Uyai mubatsire, imi marudzi ese akapoteredza, unganai!’”+ Haiwa Jehovha, itai kuti vanhu venyu vane simba* vadzike kunzvimbo iyoyo. 12 “Marudzi ngaasimuke, auye kuBani raJehoshafati;Nekuti ikoko ndichagara pasi kuti nditonge marudzi ese akapoteredza.+ 13 Pinzai jeko, nekuti zvirimwa zvaibva. Uyai muzotsika-tsika mazambiringa, nekuti chisviniro chewaini chazara.+ Waini yava kufashukira mairi kuyerera ichipinda, nekuti zvakaipa zvavo zvawandisa. 14 Mubani rekutongwa mune vanhu vakawanda zvekuwanda zviya,Nekuti zuva raJehovha raachatonga vanhu mubani iroro rava pedyo.+ 15 Zuva nemwedzi zvichasviba,Uye nyeredzi hadzizopenyi. 16 Uye Jehovha achadzvova ari muZiyoni,Achadanidzira ari muJerusarema. Uye denga nenyika zvichazununguka;Asi Jehovha achava nzvimbo yekupotera yevanhu vake,+Rusvingo rwevaIsraeri. 17 Uye muchaziva kuti ndini Jehovha Mwari wenyu, anogara muZiyoni, gomo rangu dzvene.+ Jerusarema richava nzvimbo tsvene,+Uye vatorwa havazopfuurizve nemariri.+ 18 Zuva iroro mumakomo muchachururuka waini inotapira,+Muzvikomo muchayerera mukaka,Uye hova dzese dzenyika yeJudha dzichayerera mvura. Chitubu chichayerera chichibva mumba maJehovha,+Uye chichadiridza Bani reMibayamhondoro. 19 Asi Ijipiti ichava dongo,+Uye Edhomu ichava sango risingagarwi,+Nemhaka yekurwisa kwavakaita vanhu veJudha,+Vachideura ropa risina mhosva munyika yacho.+ 20 Asi nyika yeJudha icharamba ichigarwa,Uye muJerusarema muchagarwa kwezvizvarwa nezvizvarwa.+ 21 Ndichati ropa ravo randakanga ndati rine mhosva, harisisina mhosva;+Uye Jehovha achagara muZiyoni.”+
^ Kureva kuti “Jehovha Mutongi.”
^ ChiHeb., “ndichaita kuti zvidzoke pamisoro yenyu.”
^ Kana kuti “varwi venyu.”